2 LG Optimus 2x (III) ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Androidsis
LG Optimus 2x (III) ကိုစစ်ဆေးခြင်း
el_iulius | | LG, reviews, လဲ tutorial
LG သားရဲနှင့်ဤစမ်းသပ်မှု၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအရစ်ကျ။ ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ် Terminal မှရရှိသောစွမ်းဆောင်ရည် ဤအခွံနှစ်ခုနှင့်ငွေခြံစည်းရိုးကြားတွင်ပါဝါအများစုပါ ၀ င်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာ ... ပရိုဆက်ဆာ။ Nvidia Tegra2သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်။ ဒီဖုန်းမှာရှိတယ် အံ့သြဖွယ်အလားအလာ။ ရွေ့လျားနိုင် Full HD 1080p ဗွီဒီယိုများကိုမည်သည့်တီဗီတွင်မဆို HDMI cable ဖြင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည် အံ့အားသင့်စရာ။ multimedia contents တွေကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက် SD SD နဲ့ microSD တို့ကိုအသုံးပြုပြီးသင်လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ HD player ထည့်သွင်းထားတဲ့ TV နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရုပ်ရှင်၊ စီးရီးဒါမှမဟုတ် YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းထဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်, အမှန်တရား, ငါအတည်ပြုရန်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ဥပမာ Gameloft HD နှင့် EA Sports ကဲ့သို့သော“ လျောက်ပတ်သော” ဂိမ်းအများစုသည်အချက်အလက်များကို SD သို့ကူးယူရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြaနာတစ်ခုသို့ပြေး။ ပုံမှန် SD မှတ်ဉာဏ်သည် internal SD ဖြစ်သည်။ The အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပြင်ပ SD သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပြီး၎င်းတို့သည် LG ၏ internal SD နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်၍ အမှားပြန်ပေးသည်။ application များ၏ .apk ဖိုင်များအား "patch" ပြုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့ကို LG တွင်ပြproblemနာမရှိဘဲထည့်သွင်းနိုင်သည့် executable တစ်ခုရှိပါသည်။ ငါမအောင်မြင်ဘူး အမှတ်တရနှစ်ခုကို "ချိတ်ဆက်ရန်" အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါသည်။ Root လိုအပ်တယ်။ ဖုန်းကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ပြproblemနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုနည်းနည်းလေးပိုလွယ်အောင်လုပ်သင့်တယ်။
La လျှောက်လွှာတင် / တပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုအထင်ကြီးမြန်နှုန်းမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မလိုဘဲတပ်ဆင်မှုများကိုစီမံနိုင်သည်။ Application များကိုမှတ်ဉာဏ်မပြည့်မှီအထိထည့်ပြီးယခုသင်လုပ်နိုင်သည်။ လျှောက်လွှာတင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာမီနူးတွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်မြူးတူးခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်းရှိခဲ့သည့်အပလီကေးရှင်းများကိုတစ်ဖက်တွင်အက္ခရာစဉ်အလိုက်စီထားသည်။ နောက်ပြီး၊ installation လုပ်ဖို့အတွက်သင်စျေးကွက်ကနေ .apk ကတဆင့်ဝင်သမျှ။ ငါနည်းနည်းဖရိုဖရဲဖြစ်လာသည်သောဤအဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
ဤ terminal အတွက် LG interface ၏အဓိကအကြောင်းအရာကို ဆက်လက်၍ ၎င်းကိုသတ်မှတ်ရန်စကားလုံးမှာ - \_ t ရိုးရှင်း။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအလွန်အကျွံရိုးရှင်း။ ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက်မူရင်း user interface အတွက် CyanogenMod ၏ ADW ကဲ့သို့သော user interface ကိုနှစ်သက်သည်။ ဥပမာ HTC Sense ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်စေးကပ်မှုကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ပိုမို၍ ခေတ်မီဆန်းပြားသောအင်တာဖေ့စ်တစ်ခုကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ကာတွန်းရုပ်ပုံများ၊ ပိုမိုလှပသောသို့မဟုတ်ပိုမိုပီတိဖြစ်စရာများရှိသူတို့အတွက်ဤ terminal အတွက် LG ၏ interface သည်အချိန်တိုအတွင်းမှာပင်ကြီးထွားလာလိမ့်မည်။
ယင်းကြောင့် Quadrant တွင်ရရှိနိုင်သောစံနှုန်း…အံ့သြစရာ။ The ရလဒ် 2500-2550 အကြားအမြဲရှိပါတယ်။ HTC Sensation ပါသောဆိပ်ကမ်း (၁၈၀၀-၁၉၀၀) ခန့်တွင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး Galaxy S1800 ၏အမှု၌ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1900 ခန့်ကိုပြောလိမ့်မည်။ ဒီရလဒ်ကထင်ဟပ် pointer hardware အတွက်ဒီ terminal ၏အလောင်းအစားသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် HDMI ဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူစွာရွေ့လျားနိုင်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းကိုလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုခြင်း (ကြည့်ရှုသည့်ဗွီဒီယိုများဖြင့်)၊ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလွယ်ကူခြင်းတို့တွင်ပြသသည်။ ဤအရာအားလုံးကို Froyo 2.2.2 မှထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်များစွာလျော့ကျသွားသည်။ ဒီ terminal ကိုဘယ်အချိန်မှာမွမ်းမံမယ်ဆိုတာငါသေချာပါတယ် Gingerbread သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်။
အမှားများ ငါတွေ့ပြီ၊ အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမသက်ဆိုင်။ ငါဂိမ်းပြproblemနာအတော်လေးလေးနက်စဉ်းစားပါ။ ဂိမ်းကိုတပ်ဆင်ရန် .apk ဖိုင်ကိုပြုပြင်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ နောက်ထပ်တွေ့ရသောနောက်ထပ်အမှားတစ်ခုမှာ အကယ်၍ သင် terminal ကိုသင် (ပိတ်သော့ကို သုံး၍) သော့ခတ်လျှင်တူညီသောသော့နှင့်မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ သော့ခတ်မျက်နှာပြင်သည်မပေါ်လာပါ။ ၎င်းကိုဖွင့်သောအခါ၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုမီမြင်သောမျက်နှာပြင်သည်စက္ကန့်၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံပုံပေါ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်ပိတ်ဆို့မှုပြန်သည်။ Gingerbread ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် (ကျွန်ုပ်၏ HTC Desire တွင်ဖြစ်ပျက်နေပုံရသည်) ငါရှာတွေ့ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအမှားသည် LG အပေါ်မူတည်သည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုအနည်းဆုံးသိလိုသည်မှာ YouTube ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသောအခါ၊ မျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီးနှင့် YouTube ဗွီဒီယိုအဆုံးသတ်သောအခါ terminal သည်အလိုအလျောက်သော့ခတ်သွားလိမ့်မည်။ ထည်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဘက်ထရီဆွဲရန်ရှိခြင်း၏အချက်အထိ။ သီးခြားဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်ဗီဒီယိုစာရင်းတစ်ခုကျွန်ုပ်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးပြီးဆုံးသောအခါဖုန်းသေသွားသည်။
ကျွန်တော့်အသိမိတ်ဆွေများကိုဒီ terminal ကိုအကြံပေးပါလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်တတ်နိုင်လျှင်ဝယ်ပါ။ အကယ်၍ မေးခွန်းဖြစ်ခဲ့ရင် Galaxy S2, HTC Sensation or LG Optimus 2x ... ငါအရမ်းသံသယဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့သင်? ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ
ငါသည်သင်တို့ကိုအချို့သောဗီဒီယိုများနှင့်အချို့သော terminal ကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်ထားခဲ့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG Optimus 2x (III) ကိုစစ်ဆေးခြင်း
ငါ၏အ Sensation ၏ 2.224 အမြန်နှုန်းနှင့်
ကောင်းပြီ၊ ငါမှာ LG 2x နဲ့ Samsung GSII ရှိတယ်။ ငါက Samsung ကိုအကြိမ်တစ်ထောင်လောက်ပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာပြောရမယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့ ram က Samsung ရဲ့ 1gh ကိုပြသတာကသင်ဘာပဲလုပ်လုပ်ဖြတ်တောက်စရာမလိုဘဲအရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းတစ်ခုကစားနေပြီးမှတ်ဉာဏ်အားမဖျက်စီးခင်သို့မဟုတ်ပျက်သွားလျှင် (သို့) အဆိုးဆုံးစနစ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီအခြားဂိမ်းတစ်ခုသို့ပြောင်းလိုလျှင် lg ၏ 512mb သည်အလွန်တိုတောင်းသည်။ lg တွင်ဂိမ်းများအတွက်လိုက်ဖက်မှုများစွာရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် tegra၊ သို့သော်အခြားသူများပင် lg တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဒါ့အပြင် LG ရဲ့စျေးနှုန်းဟာယူရို ၁၀၀ ထက်လျော့နည်းသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Samsung ကိုဖမ်းမိမှာပါ။
နောက်ဆုံးတော့ HTC sensation ကိုငါမစမ်းသပ်နိုင်လို့မှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။
ဒီစာမျက်နှာပေါ်က Motorola atrix၊ ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့တူညီမှုမရှိတဲ့ဖုန်းအကြောင်းငါဘယ်တော့မှမရည်ညွှန်းတာလဲ။
Samsung Galaxy S2 ကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သံသယမရှိဘဲ၊ ဒီဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ galaxy S II ကိုပိုကြိုက်တယ်
လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ငါဒီတစ်ခုနှင့်အတူနေပါတယ်၊ အပြီးသတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြစ်ကြပြီးနိမ့်သောနှုန်းထားဖြင့်သင်ကအရမ်းတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းအတွက် terminal ကိုရှိသည်။ ၏ပထမ ဦး ဆုံးလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Gt ပြိုင်ပွဲ HD
သစ်သီး Ninja THD
ဒီမိုဘိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးပြproblemနာကတော့ xD ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်နိုင်ပေမယ့် SG2, htc အားလုံး ......
နောက်ထပ်သိချင်စိတ်, ငါအရသာအတွက်ကားထဲတွင် GPS ကိုသုံးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအရမ်းပူလာတယ်။ ကြွင်းသောအရာအဘို့, Gingerbread ကိုစောင့်ဆိုင်း !!
ကောင်းပြီ, ဂိမ်းများကိုဘာမှပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ် patch ကိုမပါဘဲငါ့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသွားကြသည်, သူတို့ကအတွင်းပိုင်း sd ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေကြသည်နှင့်သူတို့ပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ငါ gameloft ထံမှအနည်းငယ်ရှိသည်။
ယခုနှစ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာသောသူများအနက်ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများဆုံးရရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် LG ၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရာများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းသည်။ တစ်ချိန်ချိန် 2x
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့် preview အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
လူသား၊ ငါကမျိုးဆက်သစ်မိုဘိုင်းအတွက်ယူရို ၅၀၀ သုံးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့အကောင်းဆုံးကတော့ Samsung Galaxy S500 🙂
LGO2x သည် SGSII မှယူရို ၆၅၀ အတွက်ယူရို ၅၀၀ အခမဲ့ကုန်ကျသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အရည်အသွေး / စျေးနှုန်းတွင် LG သည်မဆုတ်မနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊ စင်စစ်သင်သည် SGSII နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲငွေကိုသုံးရန်ဆန္ဒရှိသည်၊ ။ 500Ghz နှင့်ဖန်သားပြင်တွင်အလုပ်လုပ်သော ram ကဲ့သို့သောရှုထောင့်များနှင့်အခြေခံစံနှုန်းအချို့စစ်ဆေးမှုများတွင် (အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ FPS အကြောင်းပြောလျှင်ဤရလဒ်များသည်ခန့်မှန်းရသည်မှာ LG 650 SGSII 1.2)
ဤနေရာတွင် LG OPTIMUS X2 ယူအက်စ် ၄၀၉.၉၉ ၏ SPAN စျေးနှုန်းများသည်ဤနေရာတွင်ပါ ၀ င်သည်
Samsung Galaxy S2 သည်ယူရို ၅၉၉.၉၉ ဖြင့် VAT နီးပါး ၁၀၀ ပိုပြီး HDMI ကေဘယ်လ်မပါ ၀ င်သော်လည်းဖုန်း ၂ ခုကြားတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရပြီး LG Optusus X599,99 Gingerbred က၎င်းကိုပိုမိုကြီးမားစေရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တွန်းအားနှင့်မိုဘိုင်းနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်။
၀ က်ဘ်ကိုကြည့်ပါ။ LG Optimus X2 ထက်ယခုလျော့နည်းနေပြီးယူရို ၃၉၄.၉၉ ဖြစ်သည်။
ဒီအဆင့်ကယူရို ၃၅၀ အထိကျလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါ ၀ ယ်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါ။
အကယ်၍ galaxy s2 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း၎င်းသည်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုလိုသူများအတွက်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သော်လည်းအလုပ်အတွက်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကို Fluo နှင့်မြန်နှုန်းရှိ S2 နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတွင် Froyo ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်ဂျင်းပေါင်မုန့်ရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
မာရီယာ souza ဟုသူကပြောသည်
LG Optimus နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
မာရီယာ Souza မှတုံ့ပြန်ပါ
Sony Ericsson TXT Pro သည်လူမှုကွန်ယက်များကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC Wildfire S (III) ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။